प्रेस काउन्सिल विश्वसनीय बनाउनका लागि नेतृत्वमा सालिन र सौम्य व्यक्ति पहिलो आवस्यकता हो । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
प्रेस काउन्सिल विश्वसनीय बनाउनका लागि नेतृत्वमा सालिन र सौम्य व्यक्ति पहिलो आवस्यकता हो ।
काठमाण्डौं। थोरै प्रे’स का’उन्सिलकै कुरा गरौं । यो बि’षय पछिल्लो पटक निकै पेचिलो बनेको छ । स’र्बोच्च अ’दालतले सर’कारको निर्णय वि’परित आदेश दिए’कोले बि’षय बल्झिन पुगेको हो। अ’दालत, सर’कार वा अन्य नि’काय भन्दा प्रेस का’उन्सिलको बढि आ’वस्यकता सं’चार संस्था र संचारकर्मीलाई पर्छ । यसका अ’ध्यक्षदेखि स’दस्यहरु पनि संचार सस्थाकै हितमा का’म ग’रुन भन्ने अपेक्षा हो । खा’समा का’उन्सिलका नि’यम, सं’हिता, प’रिधी र अ’धिकार पनि यहि से’रोफेरोमा के’न्द्रीत छन् ।
सर’कारी निकाय भ’एकोले सं’चार कर्म वाहिरका आम ना’गरिकहरुले पनि य’सका ग_तिविधी र कामहरु नि’यालीरहेका हुन्छन् । बर्त’मान डि’जिटल प्रविधी र खुल्ला सं’चार आ’यामहरु छ’रपष्ट भएकोले क’सैले चाहेर पनि यसका ग’तिबिधी लु’काउन सक्दैन । त्य’सैले, यसका सवालमा वि’रोध वा स’मर्थनमा व’हस च’र्काचर्की हुनु स्व’भाविक पनि हो । तर, यो बि’षय यति धेरै स’तहमा आ’उनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन भ’न्ने महत्वपुर्ण पा’टो हो ।
हरेक संस्थाको नेतृ’त्व र जि’म्मेवार सम्हालेको प्र’मुख व्यक्ति अ’सल, वि’वादरहित, उदाहरणीय, आ’म सम्मानित, स’र्वस्वीकार्य, स’क्षम, द’क्ष, निष्पक्ष, नि’डर, चरित्रवान, गै’रराजनीतिक, सं’चार व्यवसायीक र स’र्बप्रिय हुन जरुरी हुन्छ । तर, वि’डम्वना भन्नुपर्छ, पछि’ल्लो पटक सरकारी अड्डामा रा’जनीति नि’युक्तिले यि स’बै गु’ण भएका व्यक्ति रि’ङ आउट छन् । यो र्दु’भाग्य हो । आ’मुल परिवर्तनका लागि माथि उ’ल्लेखित बि’षय अनिवार्य छ ।
छोडौं, यी आ’सा गरि’एका कुरा भएनन् । प्रे’स का’उन्सिलको पछिल्लो कु’रा गरौं । प’छिल्लो तिन बर्षमा सर’कारी कु’नै नि’काय स’बैभन्दा बढि वि’वाद र अ’विश्वास सृ’जना भ’एको छ भने त्यो हो प्रे’स का’उन्सिल । सं’चारकर्मीमा मा’त्र हो’इन, सारा जनतामा विश्वास गु’माएको कुनै संस्था हो भने त्यो हो प्रेस काउन्सिल । यसका प्र’माणहरु सं’चार र सा’माजिक संजालका स्थानहरुमा छ’रपष्ट छन् ।
किन प्रे’स का’उन्सिलप्रति जन’ताको विश्वास टु’ट्दै गयो त ? खा’स कारण, माथि उल्लेखित गुण’का आ’धारमा स्वतन्त्र प्र’तिश्पर्धावाट छनौट नग’र्नु नै प्र’मुख का’रण हो ।
अब लागौं, अहिलेको कुरा । अहिले सरकारले प्रे’स काउन्सिलको का’र्यवाहक अ’ध्यक्षमा दु’र्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ । भलै उनको नियुक्ति राजनीतिक नै भएपनि नि’वर्तमान नेतृत्व भन्दा उनि धेरै गु’णा काउन्सिल अध्यक्षका लागि ला’यक छिन् । व्य’क्तिगत कु’रा गर्नुपर्दा उनि कानुन बि’षय पढेर पुर्ण रुपमा प’त्रकारिता जिवन व्य’तित गर्दे आ’एकी छिन् । हो, रा’जनीतिक नि’युक्ति गर्न हुँदै’नथ्यो, यो नै वि’श्वसनीय तरि’का हो । तर, जब राज’नीतिक नियुक्ति गरिन्छ, केहि न केहि पदको लायक व्यक्ति परोस भन्ने स’रोकार सबैको चाह’ना हुन्छ ।
पछिल्लो प’टक प्रे’स काउन्सिलले सारा वि’श्वास गुमाउनुको प्रमुख कारण पहिल्यै विवादित र सर्वअस्वीकार्य नेतृत्व हुनु हो । यो बिषय संचार सम्बद्ध व्यक्ति लगायत आमनागरिकहरु सबैलाई थाहा छ । निवर्तमान नेतृत्व भन्दा दुर्गा भण्डारीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने गु’ण य’थेष्ट छन् । यी तमाम बिषय हामीले अहिलेसम्म देखेर, भोगेर र जनताका विभिन्न प्रतिक्रियाबाट स्प’ष्ट थाहा पाएका आधारहरु हुन् । रा’जनीति नियुक्ति भएपनि पदमा बसेपछि निष्पक्ष भुमिका खेल्न सक्नु ज्यादा म’हत्वपुर्ण हुन्छ । जो व्यक्ति सर्बाधिक आँफै विवादित छ, त्यो व्यक्तिको ने’तृत्वले सम्हालेको संस्था पंगु बनेको पछिल्लो उ’दाहरण हो प्रेस का’उन्सिल । त्यसैले, अबको नयाँ नेतृत्वले प्रेस का’उन्सिलको विश्वसनीय उ’चाईलाई बढाउन धेरै मि’हिनेत गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो का’र्यवाहक अध्यक्षको मु”द्धा अझै अ’दालतमा वि’चाराधीन छ । त्यहि आ’धारमा अध्यक्ष नभनी कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेस काउन्सिलमा हुँदै आयो । अब अदालतले भवा’नी बरालको मुद्धा तु’रुन्त टुंग्याइदिनुपर्छ । र, म’न्त्रिपरिषदले सोझै अध्यक्षको नि’युक्ति गर्ने अ’धिकार पाउनेछ । यसको पहिलो ह’कदार नै दुर्गा भण्डारी हुनेछिन् । अहिलेको अदालतको आदेशले वर्तमान नेतृत्वको अबधी एक म’हिनासम्म रहने’छ । प्रे’स काउन्सिल वि’श्वसनीय वनाउनका लागि ने’तृत्वमा सा’लिन र सौ’म्य व्यक्ति पहिलो आवस्यक’ता हो ।
Previous जापानबाट आयो खुसिको खबर!ज्वाला सङ्ग्रौला प्रतियोगितामा विजेता बनिन्,बधाई!
Next कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप गर्न साहसी नेपाली छोरी रमा वलीको जोडदार माग !सहमत भए शेयर गरौं।